आज हामी Fastboot मोड कुरा। के यो तल विस्तृत वर्णन गरिएको छ। यो समय बारेमा, मालिकको कि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम मा सञ्चालन मोबाइल उपकरणहरू विभिन्न सामना छ।
हामी Fastboot मोड बारेमा हाम्रो कुराकानी जारी। यो के हो, हामी यस खण्डमा वर्णन। उदाहरणको रूपमा, एन्ड्रोईड सिस्टम विचार गर्नुहोस्। यो सुविधा एक विशेष राज्य, जो संग तुलना गर्न सकिन्छ मा उपकरण राख्छ निद्रामा मोड। अक्सर उल्लेख सुविधा मूल-अधिकार उत्पादन समयमा प्रयोग गरिएको छ।
अब Fastboot मोड, यो के हो, तपाईं पहिले नै थाहा कसरी विचार गर्नुहोस्। चालु यो सफ्टवेयर मा उपकरण रिसेट भन्ने तथ्यलाई कारण छ गर्दैन। यसको खोल छैन पढ्न उपलब्ध एक क्षेत्र मा स्थित छ भन्ने तथ्यलाई। यो संग पनि आवश्यक सिस्टम फाइलहरू मूल-अधिकार पहुँच हुन सक्दैन भनेर बाहिर जान्छ। यहाँ Fastboot मोड राजस्व मा आउँछ। कसरी बाहिर निस्कन तपाईं प्रमुख परिवर्तन गर्न योजना छैन भने, हामी जारी छौँ। यो सुविधा बिना, यो अनौपचारिक मंच स्थापना गर्न असम्भव छ।
यस्तो शासन को सुविधाहरू एक - अनुमति यसको कारखाना अवस्थामा रिसेट गर्न। त्यसैले यो अवधि पुन (रिकभरी) विभिन्न स्रोतहरूबाट भेट्ने गर्न सम्भव छ। उपकरण प्रयोग पनि यदि यो केही पैच या फर्मवेयर स्थापित भएको छ, तपाईं आफ्नो सिस्टम पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। Fastboot तर पनि मञ्चहरूमा को स्थापना को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मोडमा ग्याजेट काम मात्र द्वारा युएसबी मार्फत कम्प्युटरमा जडान गर्न आवश्यक छ। सबै जो खुला उपलब्ध छन् कार्यक्रम, को एक विशेष सेट आवश्यक काम गर्न। चालक प्रणाली अक्सर तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउन गर्दैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा म्यानुअल स्थापना गरिनु पर्दछ। को "उपकरण प्रबन्धक" मार्फत हार्डवेयर चलाउन सफ्टवेयर प्रयोग गरेर। यसलाई एन्ड्रोइड एडीबी इन्टरफेस चयन गर्नुपर्छ।
त्यहाँ वर्णन मोड छोड्न धेरै तरिकाहरू छन्। उपकरण बाट ब्याट्री हटाउँदै। केहि सेकेन्ड को लागि हामी पर्खिरहेका छन्। को ठाउँमा यो फिर्ता। फोन अन गर्नुहोस्। यसलाई सामान्य रूपमा लोड गरिएको छ। खोल्न यसलाई गर्दैन भने, "सेटिङ"। को "द्रुत डाउनलोड" प्रयोग गरेर "आवेदन" मा। चेक मार्क हटाउनुहोस्। तपाईँको मेसिन रिबुट। तपाईं एन्ड्रोइड 4.0 प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, "प्रणाली" खण्डमा जानुहोस्। हामीले वस्तु "पहुँच योग्यता" पाउन। वस्तु "द्रुत डाउनलोड" विरुद्ध चेक मार्क हटाउनुहोस्। उपकरण पुन: सुरु। प्रणाली सामान्य मोडमा सुरु हुन्छ। फोन प्रतिक्रिया गर्दैन भने, एक कठिन रिसेट प्रदर्शन। अब तपाईं Fastboot मोड बाहिर प्राप्त गर्न कसरी थाहा छ। यसलाई के हामी माथि वर्णन गरेका छन्।
त्रुटि 923 "प्ले स्टोर": के?
\_ Windows \_ System32 \_ चालक \_ आदि: फोल्डर सी मा होस्ट फाइल क्षतिग्रस्त के?
को "एन्ड्रोइड" मा इमेल कसरी स्थापित गर्ने। आफ्नो फोनमा ई-मेल सेटिङहरू छिटो तरिका
म ढोका को लागि एक कम्बल किन चाहिन्छ?
माज्दा CX-5 ( "माज्दा") मालिकको समीक्षा
जीवित लागत के समावेश छ?
पुस्तकालय। शब्द, एटाइमोलोजी, हिज्जे को अर्थ
कर्लिंग लहर - मात्रा Hairstyles बनाउनको लागि आदर्श उपकरण
अध्याय द्वारा "मृत प्राण" को एक संक्षिप्त retelling